Faah faahin ka soo baxeysa Duqeyn ka dhacday gobolka Gedo – SBC
Faah faahin ka soo baxeysa Duqeyn ka dhacday gobolka Gedo
Deegaanka Yaaqle oo u dhexeya degmada Baladaxaawo ee Degmada Ceelcade ayaa shalay waxa ka dhacay duqeyn ay halkaasi ka geysteen diyaaradaha dagaalka oo loomaleynayo in ay laheyd dowlada Kenya .
Sida la rumeysan yahay diyaaradahaasi duqeynta ay geysteen waxaa ka dhashay khasaare nafeed, waxaana soo baxaya in duqeyntaasi ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 4 qof halka dad intaasi ka badana ay ku dhaawacmeyn .
Dadka deegaanka ayaa dhankooda xaqiijiyay in duqeynta ay geysteen diyaaradahaasi dagaala ay haleeleen goob bali ay oo ay dadku biyo ka dhaansanayeen, inkastoo ay ilo wareedyo kale qeexayaan in goobaha la duqeeyay ay ka mid ahaayeen fariisimada Xarakada Alshabaab Almujaahidiin, inkastoo arinkaasi ay beeniyeen Saraakiil ka tirsan Xarakada.
Marka laga soo tago khasaaraha ka dhashay duqeyntii shalay, ayaa waxaa arinka duqeymaha diyaaradaha Kenya iyo kuwo kaleba walaac xoogan ka muu jiyay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha gobolada Koonfureed gaar ahaan gobolka Gedo, iyagoona sheegay in arintani ay ku abuurtay walbahaar .
Sikastaba ha ahaatee duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha shisheeyo qeybo ka mid ah somalia ayaa waxay noqoneysaa tii labaad iyadoo kal hore ay aheyd markii duqeyn xoogleh oo ay dad rayid ahi ku nafwaayeen laga geystay gobolka Jubada dhexe.